Xisaabinta cawska u Duubayno
Miisaanka sawir 1: 0.5 1 2 3 4 5 6 8 10
Dhererka dhagarta Y
dhererka oo duudduuban A
width oo duudduuban B
miisaanka oo duudduuban V
Sargaal ka bidix ilaa midig
Markaasaa Ananiyas tegey sare ee hoos ka
Qiimaha cawska 1 roll
shaqada 1 roll
Y - Dhererka dhagarta
X - width ee dhagarta
A - dhererka oo duudduuban
B - width oo duudduuban
C - reserve, ayaa muujiyay sida boqolkiiba
V - miisaankiisu yahay hal duudduuban waa in kiiloogaraam
Dooro Attam jihada waayo bandhigay ee sawirka.
Si loo xisaabiyo kharashka waxaad cayimi kartaa qiimaha halkii kitaabkii duudduubnaa iyo kharashka shaqada ay rakibaadda.
Abuur qayb ku saabsan kaalmadaada cawska siman cagaarka rogid casri ah oo raaxo leh u qurux badan. cover herbaceous Tani, wixii uu iibiyey in duub of cows kaalinta waa in miraha cawska.
Sida caadiga ah, shirkadaha iibinta cagaarka rogid, oo bixiya gargaar iyo in ay Attam. Laakiin, isagoo aqoonta qaar ka mid ah, waxa aad naftaada u samayn kartaa shaqada.
Barnaamijkayagu xisaabin doonaa sida duub badan oo cawska loo baahan yahay si loo abuuro cover a siman grassy goobta oo dhan. All aad u baahan tahay in la ogaado waayo, taasu waa size ee dhagarta iyo mid kitaabkii duudduubnaa caws cows, iyo boqolleyda stock aad u baahan tahay. Iyadoo macluumaadkan, waxaad si fudud u xisaabi kartaa tirada duub in aad u baahan tahay lahaa, iyo kharashka badan tahay. Ka dib markii in, aad leedahay in la sameeyo oo dhan waa iibsato oo aad cawska beerta ama cawska hore.
Beerista gacmahooda - waa u fududahay.
Fadlan la soco in boqolleyda stock noqon doonaa 5 boqolkiiba goob caadiga ah iyo 10 ee deegaanka la sariirood ubax, ubax sariirood iyo Waddooyinkiisa beerta.
Ka hor inta Socota si rakibo of cawska, waa in aad u diyaariso goobta. Tan waxaa lagama maarmaan ah in meesha laga saaro qashinka oo dhan, iyo dhagaxyo, ka saar haramaha. Ciidda yeelan doonaan in ay xamili kiimikada gaar ah iyo isku toosin. Intaas ka dib diyaarin dheecaan. Dhamaadka wajiga diyaarinta of madal hoos cawska waxaa ka buuxsamay ciidda bacrin ah, iyo todobaad ka hor la filayo yeynan dilaacday. Ka hor inta yeynan cawska, haddii dhulka waa mid aad u qalalan, waa in la qoyan.
Haddaba cawska la dhigi karaa. Tani waa in la sameeyaa ugu dambayn 72 saacadood ka joogo marka cawska laga gooyay. Ama, haddii ay taasi suurtagal ahayn, waa in aad la geeyo caws barta a har iyo waxa mararka qaarkood biyaha ilaa rakibo.
Ha isku laab duub on kasta oo kale oo in ka badan 4 layers. Xitaa cagaarka wanaagsan load aad u weyn ahaan uu u.
Xasuusnow, waa la jecel yahay in ay iska jiifsaday cawska isku mar. Tani waxay abuuri doonaa a daahan uniform siman.
Waqtiga ugu wanaagsan ee yeynan cows waxaa loo arkaa bilowga dayrta ama gu'ga. Laakiin waxaa muhiim ah in la xasuusto in dalka waa in aanay noqon waqtigan ee la barafeeyey ama aad u qoyan.
Markaasaa Ananiyas tegey caws bilaabmaa u dhow meesha way adag tahay in dukaanka. Habeynta cawska waa in xariiq toosan. Haddii loo baahdo, ku daboolaan goobaha of qaab aan caadiga ah, meelaha adag way xiran yihiin oo gogo 'gaar ah cut of cows ka saamiyada.
cover Saf walba waa in ay bilaabaan oo ay joojiyaan la saxan buuxa, gabal noqon doonaa baaxadda aan ka yarayn ay bar. The haray burburi kaalinta safka dhexe, laakiin ma aha ee gobolka.
Kadib markii uu dhamaystay cawska kasta oo taxane dulfuulan. In formation of tuulo ama Niyadjabka lagama maarmaanka u ah kor u cows iyo waafajinta baxay dusha hoose. Haddaba mar labaad dulfuulan cawska.
Saf kaalinta mowjadda qaraabo in kasta wastaadnimada kale. Waxaa muhiim ah in la hubiyo in taarikada cows yihiin si adag u riixriixan oo midba midka kale laakiin ma daboolaa.
Socda on cows cusub-dhigay laguma talinayo.
Ka dib markii ay dhameystirtay saareen garoonka, meesha bannaan ee loo baahan yahay in aad ku buuxisid dun isku dar ah oo gaar ah. Halabuurka ee walaaqdey ku xiran tahay nooca ciidda aad leedahay on your site.
Ulozheniju cawska waa in la si fiican u tuuray biyo. On mitir kasta oo laba jibbaaran qaadan doonaa oo aan ka yarayn 15 litir. toddobaadka soo socda lagu guda jiray mar waraabinta maalin cawska ah ayaa sidoo kale loo baahan yahay.
Ka dib markii muddo bil ah ee xididdada cawska wada kori doono la aasaas u ah oo ku saabsan taas oo la dhigay caws, muuqaalka dhirta iyo cagaarka noqon doonaa raagaya.
labo toddobaad ka dib markii yeynan cawska ka dib waa la jari karaa. Tani waa in lagu sameeyo guud ahaan jihada ay Attam oo ka gooyay kaliya top of the garbaha of cawska. Markii ugu danbeysay ee cawska waxaa inta badan la gooyaa timaha ee September.
In guga, ka dib markii dhulka la diiriyay, dilaacday oo mar kale la shafay cawska, laakiin mar kale, kaliya talooyinkaas oo ka mid ah garbaha of cawska ka gooyay.
Inta lagu jiro bilood ka diiran, cawska waa la waraabin ku saabsan 10 maalmood oo kasta.